Malunga nathi - iZhengzhou Fangming Hi-Temp Ceramic New Material Co, Ltd.
Zhengzhou Fangming High-Ubushushu yodongwe New Material Co., Ltd. yasekwa ngo 2015. Yinkampani enamatyala athile eqalisiweyo kwaye yasekwa ngumntu wendalo onenkunzi ebhalisiweyo yeIzigidi ezili-10 ze-yuan. Intsimi yezoshishino yintsimi yezinto ezintsha. Ikhowudi emanyeneyo yokuchonga ityala elingu-91410183356181033L. ILebhu kaRhulumente ephambili yeYunivesithi yaseWuhan yezeNzululwazi neTekhnoloji, iYunivesithi yaseShaxixi yezeNzululwazi neTekhnoloji, iZiko leTekhnoloji laseHenan namanye amaziko aseke intsebenziswano yexesha elide kwishishini-eyunivesithi nakwezophando.
Inkampani igubungela indawo engaphezulu kwe- Iimitha zesikwere ezili-12,000Inani elipheleleyo labasebenzi lingaphezulu kwama-55, ngaphezu kweeseti ezingama-400 (iiseti) zezixhobo ezahlukeneyo, nezikhutshwa malunga nonyaka Iitoni ezingama-20,000Ukucoceka okuphezulu kunye nobushushu obuphezulu obuphezulu bezinto ezintsha ze-nano-ceramic kunye neemveliso, ekucetyiswa lilizwe kwiKhathalogu yokucwangcisa yaseChina 2025. Kwaye kwicandelo elitsha lezinto eziphambili, amashishini emveliso ekumgangatho ophezulu wezinto ezinqabileyo ezinqabileyo zomhlaba ezisetyenziselwa imeko eyoyikekayo yokushisa okuphezulu kweeseramikhi ezifuna ngokungxamisekileyo ukuphumelela kobuchwephesha. Ishishini eliphambili luphando kunye nophuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa kwezinto ze-nano-zirconia kunye neemveliso; ukungenisa elizweni kunye nokuhambisa impahla yeenkonzo kunye neetekhnoloji.
Iphethe ngaphezulu kwe- 40 amalungelo awodwa omenzi wechizakwaye ufumene izatifikethi ezi-2 zovavanyo lwentsebenzo yesayensi nethekhinoloji kwiPhondo laseHenan. Yeyona ehamba phambili ishishini iqela Zhengzhou City 1125 Isicwangciso Jucai. Kule minyaka mibini idlulileyo, igqibe kwaye yadlula ngaphezulu kwe-16 iziqinisekiso ezithambileyo (kubandakanya iphondo laseHenan iJingtexin yeShishini lokuGcina isiQinisekiso, isiQinisekiso seShishini esiPhezulu seSizwe, iZhengzhou Intelligent Manufacturing Demctionation Qualification, isiQinisekiso seMveliso yoKhuseleko, isiQinisekiso soKhuseleko oluPhindiweyo, Umgangatho, iMpilo, okusingqongileyo, isiQinisekiso seNkqubo yoLawulo lwaMandla, isiQinisekiso soLawulo lweNkqubo, 5A isiqinisekiso esifanelekileyo sokumiselwa komgangatho, isiqinisekiso sokudibana sokwenza ushishino kunye noshishino, isiqinisekiso senkqubo yolawulo lwepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, njl.
Inkampani ikhula kwaye ivelise ubushushu obuphezulu kunye nokucoceka okuphezulu kweemveliso zodongwe esekwe kwizinto ze-oxide nano. Imeko yemveliso yi-nano, umgubo we-micron, izinto eziyimbudumbudu kunye nobushushu obahlukeneyo obuphezulu obuphezulu obenziwe ngeseramikhi ezisetyenziswe kwiindawo ezigabadeleyo; Intsimi yobushushu besicelo Yindawo eyi-0 degrees Celsius ukuya kuma-2700 degrees celcius, indawo yokufaka isicelo yile: umoya, isithuba, umoya okhuselayo, njl njl. ukukhula kwezinto ezibonakalayo semiconductor, ukugoba iglasi yefowuni ephathekayo 3D ukugoba, Ukunyibilikisa ii-alloys zeetanium, njl .; izikhombisi zentsebenzo kuthotho lwe-zirconia ephezulu yokucoceka kweemveliso kwindawo yokuqala kushishino lwasekhaya; umgangatho nobuchwephesha kuthotho lweemveliso eziveliswe yinkampani zikhokelela kwilizwe lonke, kwaye ithathe indawo ngempumelelo eJamani nase-United Kingdom kwiimarike ezifana ne-India ne-Russia. Lindela ukusetyenziswa kweemveliso zaseYurophu.
Ukuxinana kunye nokuntywila kwezitena zirconium eziphezulu (sebenzisa ubushushu 0-1720 ℃, mninzi 5.10 g / (25 ℃))
Uluvo lohlobo olutsha lwesitena esine-zirconium yodongwe olusebenzayo lusekwe kwiziphene zezitena ezixutywe ngoku-zirconium ezinje ngokuxhathisa umhlwa kunye nokumelana nokhukuliseko, ivolumu enkulu yokwakha ioyile, ukusetyenziswa kwamandla okuphezulu kunye nezinye iziphene, usebenzisa i indibaniselwano edityanisiweyo yamanqanaba amathathu ezinto ezahlukeneyo inempawu zokusika inkqubo kunye nokudityaniswa komdibaniso wokudibanisa sintering. Ine-insulation efanelekileyo ye-thermal, uxinzelelo lwe-thermal ephantsi, kunye neepropathi ezahlukeneyo zokumelana nokubola kunye nokumelana nokhukuliseko lomaleko osebenzayo ekunxibelelaneni nesisombululo seglasi. Ikwahlulahlulwe kwaba yindibaniselwano yemaleko emithathu, esebenza ngokuLukhuni, umaleko wokhuseleko kunye nokwaleka kokugquma.
Kucwangciswe kwangaphambili ukuba ubukhulu bendleko yokugquma yi-150 mm, ubukhulu boluhlu lokhuseleko yi-150 mm, kunye nobunzima bomaleko osebenzayo yi-20-80 mm, enokuhlengahlengiswa ngokweemfuno zomsebenzisi.
Umzobo obonisa ubume bezitena eziphezulu zirconium yodongwe
Sebenzisa izaleko ezintathu zezinto ezahlukeneyo ukwahlula kunye nokudityaniswa kwendlela yokudibanisa edibeneyo, kwaye usebenzise itekhnoloji yegradient edityanisiweyo kwizinto ezimbini okanye ezingaphezulu ukwenza ukwakheka kunye nolwakhiwo lotshintsho ngokuqhubekayo ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye icala ukunciphisa okuncinci kwaye woyise ukungafani kokusebenza yenxalenye yokubopha, ukufezekisa ukunyamalala konxibelelwano lwangaphakathi, ukusebenza kwemathiriyeli kukwazisa notshintsho lwegradient oluhambelana notshintsho lolwakhiwo kunye nolwakhiwo.
Umaleko osebenzayo wamkela izixhobo ezinesiseko esisisiseko esine-zirconium ukunqanda iziphene zokuzinza kwenqanaba lokuqina kwe-zirconium kunye nokubola. Indibaniselwano ye micron kunye ne nanometer powders inomxholo we zirconium oqala ku 80-94%, ufezekisa uxinizelelo 99%, kunye ne porosity kufutshane no 0. Ukuchasana nobushushu kufikelela kwi 1750 degrees celcius ngenjongo yokusebenzisa ixesha elide, ukuze ujongane ixesha elide lokusombulula isisombululo seglasi kunye neemeko zokubetha komaleko osebenzayo, kwaye uzibophelele ekufezekiseni amaxesha ama-2 okanye ngaphezulu kobomi bezitena ezingama-41 # ezihlanganisiweyo.
Umaleko okhuselayo wenziwe nge-alumina ekrwada yezixhobo zokwenza izinto okanye i-zirconium silicate. Umsebenzi wayo ubonakalisiwe kwithuba elide lokuqinisekisa ukhuseleko emva kokusebenza. Kwangelo xesha, inomsebenzi olungileyo wokunciphisa i-gradient.
Umaleko wokugquma wenziwe ngezinto zefayibha ezinokumelana namaqondo obushushu ukuya kuthi ga kwi-1650 degrees celsius, kwaye ukuqhuba kwayo kubushushu kusezantsi. Xa ubukhulu bokuyila busetyenziswa kwi-100-150 mm, xa ubushushu bokufudumeza bufikelela kwi-1400 degrees Celsius, iqondo lobushushu kumphezulu lingaphantsi kune-60 degrees Celsius. (Uyazikhethela ngokwemeko)
Izisombululo zesicelo esijolise kwi-calcium ephezulu, i-sodium ephezulu, i-fluorine ephezulu, i-barium ephezulu, kunye neglasi ephezulu ye-boron
Ngokweendidi ezahlukeneyo zeglasi, ngokweempawu zayo, unokukhetha:
Isisombululo esiqinileyo seCalcium zirconate (sebenzisa iqondo lobushushu 0-1720 ℃, indawo yokunyibilika 2250-2550 ℃, uxinano 5.11 g / (25 ℃))
Isisombululo esiqinileyo se-Barium zirconate (sebenzisa ubushushu ku-0-1720 ° C, indawo yokunyibilika: 2500 ° C, uxinizelelo: 5.52g / ml (25 ° C))
Isisombululo esiqinileyo se-yttrium-zirconium (sebenzisa iqondo lobushushu 0-1720 ℃, indawo yokunyibilika: 2850 ℃, uxinizelelo: 4.80g / ml (25 ℃))
Lindela ukusetyenziswa okujolisiweyo kwezi mveliso zingasentla ukuzinyusa ukunciphisa umda womdibaniso obangelwa kukusabela kweekhemikhali kumaqondo obushushu aphezulu, ngaloo ndlela kuphuculwa ubomi benkonzo kunye nokhuseleko lweemveliso zeglasi. Ke ngoko, xa kuthelekiswa nezinto zemveli, ukusetyenziswa okujolisiweyo kwezinto ukukhuthaza ukwanda kobomi Ikwayenye yeendlela ezisebenzayo.
Iimveliso ze-zirconium ezinzileyo, sebenzisa ubushushu kwi-1800-2200 ℃, ubungakanani be-5.10 g / (25 ℃)
Uluhlu lobushushu besicelo yi-0 degrees Celsius ukuya kwi-2700 degrees celcius, indawo yokufaka isicelo yile: umoya, isithuba, umoya okhuselayo, njl.
Umsantsa usifake ngu-0.2-0.5 mm, kwaye unokusetyenziswa njengesikimu sokudibanisa umsantsa. Umgangatho wokukhula komgama we-0-1000 ℃ ngu-5.5 × 10-6,0-1000 ℃ kwaye iqondo lokutshintsha kwexesha elihambelanayo li-0.08%.
Emva kobushushu obugqithisileyo budlula i-1700 ° C, izinto eziqhelekileyo ezi-zirconium azisakwazi ukufikelela kwiimfuno zokusebenzisa ixesha elide emva kwe-1750 ° C ngenxa yokuthamba komthwalo wabo, imvula yolwelo, kunye nokusabela okusebenzayo kwemichiza. Emva kwe-1750 ° C, kusetyenziswa izixhobo zemveli eziphezulu-zirconium. Izinto ezinjenge-AZS ziya kukhawulezisa umonakalo kunye nokhukuliseko lomhlaba. Ke ngoko, izixhobo ezizinzileyo zirconium okanye izixhobo ezinesisombululo esiqinileyo kufuneka zisetyenziswe kubushushu obugqithisileyo obuphezulu emva kowe-1750 ℃ ​​ukuhlangabezana neemeko zexesha elide lokusetyenziswa kobushushu obuphezulu kunye neemeko ekungekho lula ukuziphendula nezinye izinto ezisebenzayo. Xa iqondo lobushushu liphezulu kune-1750 ° C yokunxibelelana ixesha elide nezisombululo zeglasi okanye ezinye izisombululo zentsimbi, ubomi bethiyori bezinto eziphezulu zirconium ezinobushushu obungaphezulu kwe-1800 ° C-2200 ° C bunokunyuswa ngamaxesha ama-2-3.
Ngaphandle kokwenza izinto ezintsha ngokuqhubekayo, akusayi kubakho buqilima, kwaye kuya kuba nzima ukukhuphisana nokuphakama kokuyalela kunye nabalingane baseYurophu abanembali ende kunye nesiseko sophando lwenzululwazi esisiseko kwinqanaba lehlabathi. Ukuqala ekubekeni kwenkampani kwicandelo lobushushu obuphezulu obuphezulu besakhiwo se-ceramic ngo-2015, inkampani yenza intsebenziswano eyimveliso-eyunivesithi nophando kunye neeyunivesithi ezininzi ezaziwayo zasekhaya, inike umdlalo opheleleyo kwizibonelelo zayo, kwaye udibanise izibonelelo zophando kushishino lweyunivesithi-eyunivesithi-uphando lokuqhubeka ngokuqhubekayo kunye nokufaka iimveliso ngokuqhubekayo kwimimandla emitsha. Inkampani inamalungelo awodwa omenzi wechiza azimeleyo ali-11, asebenzayo awodwa abenzi abatsha abangama-29.
Phantsi kwesiseko sokukhokela imakethi ngetekhnoloji engundoqo, inkampani iseke imveliso yamava okuqinisekisa isebe ukubonelela abathengi ngesicelo esikhuselekileyo, esisebenzayo nesikhawulezayo sokuma, ukuphonononga iingxaki zesicelo semveliso kunye nokuphucula ukuphucula, kunye nokubonelela abathengi imveliso efanelekileyo nezinzileyo Ngexesha elifanayo lamava okufaka isicelo, siya kuqhubeka siphucula inqanaba elitsha lesicelo semveliso.
Kungale ndlela kuphela apho abathengi banokubona ukuxhomekeka kwesicelo, ukhuseleko lwesicelo, kunye nentuthuzelo yesicelo. Kungale ndlela kuphela enokuthi yenziwe ngesangqa esilungileyo, kwaye imveliso yemveliso yenkampani kunye nozinzo ziyaqhubeka. Yandisa kwaye uxhase ngamandla iR & D yenkampani kunye nokusebenza komzimba; ixhaswe ngamandla obuchwephesha bezinto ezintsha eziqhubekayo, iimveliso zenkampani ngoku zinokusebenza okuhle kunye namava. Kwangelo xesha, banesibonelelo esikhulu seendleko kwiimarike ezisakhulayo zehlabathi. Sele bekhuphisana neJamani kunye ne-United Kingdom. Imakethi ehlala kwiimveliso ezifanayo kumazwe athuthukileyo afana neJapan kunye neJapan ivelile.
Amagqabantshintshi ophuhliso lwenkampani yokucinga kunye nolwalathiso: Ukujolisa kwicandelo lezinto zirconium dioxide kunye neemveliso, ngokurisayikilisha okungenasiphelo kwezixhobo ngenkqubo yokuvelisa okuluhlaza, kugxile ekusetyenzisweni kophando kunye nophuhliso, iindlela zokuvelisa ezintsha, kunye neenkalo zesicelo esitsha kwicandelo lezinto ze-zirconium dioxide kunye neemveliso,
Ukufezekisa ukuqhubela phambili kokuqhubekayo kunye neemveliso ezithile zesicelo kunye nobungqingili benkampani ezinzileyo, ukuseka ulwazi ngophawu kushishino, kunye nokuqulunqa isikhokelo senkqubela phambili yenkampani kwisiseko sobuchwephesha obunqongopheleyo kunye namava emvula kunye nemimandla yesicelo esingenamda kunye nokwenza izinto ezintsha!
Sombulula iingxaki kwiindawo zokushushu eziphezulu
Yiba lishishini lokulinganisa kuphuhliso oluzinzileyo kushishino lweeceramics ezinobushushu obuphezulu obuphezulu
Imfezeko, iphupha, ukusebenza nzima, ezintsha;